Patrick Kluivert: England waa goob cunsuriyadeed xittaa aniga waa la i jinsi faquuqay. - Caasimada Online
Home Warar Patrick Kluivert: England waa goob cunsuriyadeed xittaa aniga waa la i jinsi...
Patrick Kluivert: England waa goob cunsuriyadeed xittaa aniga waa la i jinsi faquuqay.
Patrick Kluivert ayaa daaha ka qaadayin taageerayaasha horyaalka England ay ku dhawaaqi jireen hadalo cunsuri ah oo ay isaga ula jeedaan intii uu u ciyaarayey Newcastle.
Weeraryahakii hore, oo hada caawiye xulka Holland uga ah tababare Louis van Gaal ayaa cadeeyey in lagu oran jiray erayga Daanyeer.
Kluivert ayaa 25 kulan oo horyaalka ah saftay intii u dhexeysay 2004-05, wuxuuna sheegay intii lagu jiray waqtigaas oo xirfadiisa qeyb ka ahaa, in loo adeegsaday hadalo midab faquuq ah.
“Haa waqtigii aan ciyaaryahan ahaa waa la I faquuqi jiray laakiin sida cad kama jawaab bixineyn mana siinin wax dareen ah malaha waxay noqon doontaa wax ficil ahaan u jira,” ayuu u sheegay Goal.com.
“Hadii aan u dhega jaleeciso waxay u maleynayaa inay yihiin kuwo muhim ah waxay adeegsan karaan erayo qalafsan.
“Markasta oo aan ciyaarayo waan maqli jitay, oo aan ciyaaryahan ahaa, sidaas uma weyneyn laakiin meel walba oo caalamka ka mid ah waxaa ku jira xoogaa dad ah kuwaas oo si fiican u falanqeeya cunsuriyada.
“Marka aad joogto England oo kale, haa si fiican ayaan u hubaa.
“Hubaashii hadii aan helo kubada waxay sameynayeen codadka Daanyeerka ama waxyaabo la mid ah laakiin waxaan ahaa ciyaaryahan xaqiiqdii mana aysan I saameyneynin balse maba fiicna inaad maqasho cunsuriyad.”